किन किन्ने चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ ? यस्ता छन् आधार
शुक्रबारबाट चन्द्रागिरि हिल्सले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि १५ करोड ३४ लाख ९ हजार १ रुपैयाँ बराबरको शेयर आवेदन खुला गरेको छ । कुल कित्तामध्ये ४ प्रतिशतले हुन आउने ६१ हजार ३ सय ६४ कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ । ५ प्रतिशतले हुन आउने ७६ हजार ७ सय ५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँट गरिएको छ । बाँकी १३ लाख ९६ हजार २२ कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
कम्पनीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको आईपीओ निष्कासन गरेको हो । यो आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १३ हजार ९ सय ६० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड छ ।
लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि-आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यो आईपीओको निष्कासन छिटोमा २८ पुस र ढिलोमा ९ माघमा बन्द हुनेछ ।
किन किन्ने चन्द्रागिरिको आईपीओ ?
तपाईले आईपीओ भर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको नाफा/घाटाको अवस्था, चुक्ता पुँजी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, आम्दानी, संचिती मुनाफा, साधारण लगानी फिर्ता अवधि, अधिकतम पुँजीलाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।
चन्द्रागिरि हिल्सको प्रतिशेयर नेटवर्थ गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ८४.८८ रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ९०.६९ रुपैयाँ र आगामी आर्थिक बर्ष ०७८/७९ मा १०९.२४ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, २०७९/०८० सम्ममा प्रतिशेयर नेटवर्थ १२२.०७ रुपैयाँ पुर्‍याउने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
स्थापनाको वर्ष प्रतिशेयर नेटवर्थ ९४.५२ रुपैयाँ भए पनि गत आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसायका साथै होटल पूर्णरूपमा संचालनमा आउन नसक्दा कम्पनीले घाटा ब्यहोर्‍यो । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको नेटवर्थ पनि सुरुकाेभन्दा १० रुपैयाँले घट्न पुग्यो ।
त्यस्तै, कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २०७३/७४ मा २.१३ रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ भने आव २०७४/७५ मा २.११, आव २०७५/७६मा ०.०६ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा कम्पनी घाटामा गएर प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक हुँदै १२.६७ रुपैयाँ पुगेको छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ४ रुपैयाँ र आगामी आवमा २३.५४ रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा ३२.८४ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
लगानी गर्नु पूर्व कम्पनीले रिजर्व अर्थात् आफ्नो संचितिका कोषमा कति रकम राखेको छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी रिर्जवको अवस्थाअनुसार नै कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्ने गर्छ । जबसम्म कम्पनीको रिजर्भ अर्थात् पोजिटिभ हुन सक्दैन तबसम्म लगानीकर्तालाई सो कम्पनीले लाभांश दिन सक्दैन ।
चन्द्रगिरी हिल्सको भने पछिल्लो तिन वर्षसम्म रिजर्भ ऋणात्मक नै देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोभिडको असरले कम्पनी ऋणात्मक नै बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने आगामी आवमा कम्पनीले १४ करोड १७ लाख बराबरको रकम रिर्जभमा राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यदि प्रक्षेपित रकमअनुसार रिर्जवको अवस्था भएमा अगामी आवबाटै लगानीकर्ताले लाभांश पाउने छन् ।
यो कम्पनीको आईपीओले रेटिङ संस्था इक्रा नेपालबाट इक्राएनपीआईआर डबल बी रेटिङ पाएको छ । जसले लगानी जोखिम कम छ भन्न बुझ्न सकिन्छ । यसले कम्पनीको वित्तीय राफसाफको सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको समेत संकेत गर्छ । इक्राले कम्पनीको रेटिङ दिँदा आर्थिक संसाधन भएका संस्थापक, छोटो अवधिमा राजश्वमा योगदान पुर्‍याउने राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य, पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता कमजोर पक्ष, हाेटल व्यवसायमा परेको कोभिड-१९ को नराम्रो प्रभाव, हाइ लिभरेज र सब पार्सियल कभरेज रेसियोसहितको कमजोर वित्तीय प्रोफाइल, केबलकार सञ्चालनको सीमित ट्रयाक रेकर्ड, रिसोर्टको लागि परियोजना स्थिरिकरण जोखिम उच्च, खण्डित होटल उद्योग र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ करोड १० लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहाेरेको छ । सो अवधिसम्ममा चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीले ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ करोड ११ लाख, आव २०७९/८० मा ५० करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २४, २०७७, १५:३०:००